Nezvedu - Yantai Bondhot Hutano Technology Co, Ltd.
Yantai Bondhot Hutano Technology Co, Ltd. iri muguta guru reChina regoridhe - Zhaoyuan, Shandong Province, guta rine nzvimbo dzinoyevedza uye zvifambiso zviri nyore. Yakagadzwa muna 2012, nzvimbo yekugadzira yekambani inosvika 27,000 mita mamita. Kune vashandi vanopfuura mazana maviri mukambani ine zviyero zvekugadzira musangano, yepamusorosoro tsvagiridzo uye kusimudzira bvunzo nzvimbo, nyanzvi yekuchengetera imba yekuchengetera uye yemazuva ano uye yakazara hofisi chivakwa chine huwandu hwekudyara hunopfuura mamirioni makumi mashanu eYuan. Iyo kambani iri kunyanya kuita sainzi uye tekinoroji kutsvagisa nekusimudzira nekusimudzira kwehutsanana zvigadzirwa.
Iyo kambani inoomerera kune iyo tenet ye "hutsanana, nyaradzo, uye kugutsikana". Yemazuva ano yepamusoro sevhisi pfungwa yakaunzwa uye CIS system yakaunzwa zvakanyatsonaka, iyo inotora zvese-kutenderera brand management mode inosanganisa R&D, kugadzirwa, kutengesa uye sevhisi uye inosuma iyo indasitiri yepamusoro yepamusoro otomatiki yekumhanyisa-yekumhanyisa yekumhanyisa yekumhanyisa mutsara uye manejimendi modhi kuti ive nechokwadi cheiyo. kugadzirwa nekubuda kwemhando yepamusoro zvigadzirwa.
Dhizaini yakasarudzika, mhando yepamusoro uye basa rakanakisa ndiko kutsvaga kwekambani kusingaperi.
Iyo yekambani Gigico brand pet manapukeni anogadzirwa nemhando yepamusoro isina-dzakarukwa machira, zvichigonesa kupinza nekukurumidza uye kunamwa; super inobata polymer zvinhu zvakawedzerwa kune iyo yemukati layer inogona kusimbisa iyo mvura; rukoko rwekunze uchishandisa yepamusoro PE isina mvura membrane ine yakasimba kusanduka uye hazvisi nyore kukwikwidzwa nezvipfuyo; iyo inogadzirwa neakazara-otomatiki servo gungano mutsara pamwe nekugadzirwa kwemazuva ese kusvika mazana mashanu ezviuru zvidimbu.
Gigico brand katsi marara akagadzirwa mukambani medu haana zvinowedzerwa uye makemikari, kugona kwakasimba mukunwa kwemvura uye kwakanaka deodorization, hapana kusvibiswa kweguruva pamwe nekutonga hutano hwezvipfuyo kuburikidza neruvara.
Mumakore mashoma apfuura, ichivimba neyakagadzika chigadzirwa mhando uye nyanzvi bhizinesi maitiro maitiro, kambani yakagadzika kwenguva refu uye yakagadzikana hukama hwekudyidzana nevazhinji vadyidzani muChina pamwe neaya ari muJapan, Europe uye United States, Asia uye Africa, nezvimwewo, iyo yakaisa dombo repakona rekusangana zvinodiwa nevatengi vekunze nekune dzimwe nyika zvakanaka uye nyore uye nekuvandudza mabhizinesi 'Kukwikwidzana kwepasi rose.
Yantai Bondhot Hutano Technology Co, Ltd. inogamuchira shamwari kubva kunzvimbo dzese dzehupenyu kuti dziuye kuzoshanya, kupa rairo uye kuita nhaurirano dzebhizinesi.
- Yantai Bondhot Hutano Technology Co, Ltd.